หน้าแรก ข่าวทั่วไป မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားတင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဠနှင့်မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
– မြန်မာအလုပ်သမားများကို တရားဝင်မှန်ကန် အောင် ဘယ်လိုများ တင်သွင်းရပါသလဲ?
– MOU စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းပြီး စာရွက်စာတမ်းများကို ဥပဒေအတိုင်း မှန်ကန်အောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
ဥပမာ ပထမအဆင့် – အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်ကို ခရိုင်အလုပ်သမားရှာဖွေရေး ရုံးသို့ တင်ပြရပါတယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးကိုပို့ပေးပြီး ထိုမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော် နေပြည်တော်သို့ ဆက်လက်တင်ပြရပါတယ်။ ပြီးလျင် အလုပ်သမားနံမည်စာရင်းကို ဆိုင်းထိုးအသိအမှတ်ပြုရန် မြန်မာသံရုံးသို့ တခေါက်ထပ်ပို့ရပါတယ်။
– အလုပ်သမားကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရပါသလဲ
– အလုပ်ရှင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းရွေးပါတယ်၊ ဥပမာ အသက်၊ ကျား/မ၊ အရပ်အမြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
– ဝင်ရောက်လာတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဘယ်မှာသွားလုပ်ကြပါသလဲ။
– အလုပ်သမား အများစုကတော့ စမွတ်စာကွန်ခရိုင်၊ ဖက်ချဘူရီခရိုင်နဲ့ ဘန်ကောက်ဝန်းကျင် မြို့နယ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
– အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက် ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပါသလဲ။
– ပထမဦးဆုံး ကုမ္ပဏီကနေမှ မဲဆောက်စစ်ဆေးရေးစခန်းကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ သူတွေကို ဝန်ထမ်းများထံမှ လက်ခံရယူပြီး အစာရေစာများ ကျွေးမွေးပါတယ်။ ပြီးလျင် အလုပ်သမားများလိုက်နာမဲ့ စည်းကမ်းများကို ရှင်းပြပါတယ်။
– ရောက်လာပြီးနောက် ဘာရပိုင်ခွင့်များ ရှိပါသလဲ
– ရပိုင်ခွင့်များကတော့ နှစ်သစ်ကူးနဲ့ သင်္ကြန်တို့မှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း ဆုများပေးခြင်း မတော်တဆဖြစ်၍ ဒဏ်ရာရမှုများ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးများပေးခြင်း ခလေးမွေးစားရိတ်၊ သင်္ဂြိုလ်စားရိတ်၊ ဆေးကုသစားရိတ်များ ထောက်ပန့်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
– သဘောတူညီချက်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက် အလုပ်သမားတွေ ထပ်ပြန်လာပြီးလုပ်သေးလား၊ ကုမ္ပဏီနဲ့ကော ဘာခံဝန်ချက်တွေရှိပါသေးသလဲ။
– အများအားဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်း ၄နှစ်ကုန်ပြီးနောက် နောက်တခေါက်ပြန်လာကြပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆွေမျိုးသဖွယ် စိတ်ရှိကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ လိုအပ်တာကို တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာနေရတာလဲ ပျော်ကြပါတယ်။
– ဝင်လာမဲ့ အလုပ်သမားများအတွက် ကုန်ကျစားရိတ် ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
– အလုပ်သမားတွေအတွက် ကုန်ကျစားရိတ် မရှိပါဘူး။ အလုပ်ရှင်ကနေ အားလုံး အကုန် အကျခံပေးမှာပါ။
– ဝန်တမ်းရွေးတဲ့နည်းတွေက ကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်ခုမတူကြဘူးလို့။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်သမားလိုတာရှိတယ်၊ တချို့က Bachelor’s Degree တို့ Master’s Degree တို့လိုတယ်၊ တချို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိင်တဲ့လူလိုတယ်၊ ပြီးတော့တချို့ကလည်း ရိုးရိုးဝန်တမ်းတွေပဲလိုတာလည်းရှိပါတယ်။
ตอบ – ต้องนำเข้าในระบบเอ็มโอยู และจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด เช่นขั้นตอนที่ 1 ทำเอกสารดีมานด์ ยื่นสำนักงานหางานแต่ละจังหวัดตามที่นายจ้างต้องการ หลังได้ดีมานด์ ส่งเรื่องไปสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย และสถานทูตประเทศพม่าประจำประเทศไทยทำหนังสือส่งไปยังกรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา หลังจากนั้นเซ็นสัญญาเพื่อออกเนมลิสต์คือบัญชีรายชื่อมายังสถานทูตพม่าอีก 1 รอบ
ตอบ – คัดเลือกตามที่นายจ้าง หรือสถานประกอบการต้องการ เช่นอายุ เพศ ส่วนสูง และนำหนัก
ตอบ – เมื่อนำแรงงานเข้ามาแล้วเราจะดูแล ขั้นตอนแรกเราไปรับชาวเมียนมามาจากหน้าด่านแม่สอดมีเจ้าหน้าที่ดูแลจนถึงบริษัท หลังจากนั้นเจ้าที่บริษัทจะทำอาหารรอรับผู้ที่เดินทางมาถึง และมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งทำการอบรมเรื่องกฎระเบียบของแต่ละบริษัทที่คนงานจะไปทำงาน หลังจากนั้นพอคนงานเข้าไปอยู่ในแต่ละบริษัทเราจะดูแลเรื่องเจ็บป่วย เรื่องเอกสาร ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่แรงงานควรจะได้รับ เรื่องการสื่อสาร ภาษา
ตอบ – สวัสดิการของบริษัทก็จะมีการจัดงานรื่นเริง เช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จะมีการจับรางวัลให้แก่พนักงานทุกคนที่มาอยู่กับเรา และจะมีเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คลอดบุตร ค่าทำศพ ค่ารักษาพยาบาล
ตอบ – ส่วนใหญ่แรงงานที่หมดสัญญา4ปีแล้ว แรงงานจะกลับมาทำงานกับเราอีกรอบ เนื่องจากแรงงานคิดว่าอยู่กับเรา แบบพี่แบบน้อง พูดคุยขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บริษัทได้ทุกเรื่อง และมีความสนุกสนานในการอยู่กับเรา
ตอบ – แรงงานที่นำเข้ามาจะไม่เสียค่าใช้จ่าย เพระทางนายจ้างจะเป็นคนจ่ายให้
บทความก่อนหน้านี้บางกอกแอร์เวย์สอัดโปรงาน “เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 25” และ “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52”
บทความถัดไปหมายจับล่า ดาบช้างสืบ รัวหมดแม็ก ดับหุ้นส่วนบ่อปลา ปมขัดแย้งธุรกิจร้านอาหาร
จับตายไอ้เม่น! ตร.บุกวงไพ่ชักปืนรัวหมดโม่ บอกให้หยุดไม่ฟัง คุ้ยประวัติถึงกระจ่าง(คลิป)